Isku Darso Muuqaalada Sawirada Gudaha Iyo Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Pablo Gonder | | Design Graphic, Photoshop
Isku dar qorista sawirada gudaha leh Photoshop waa uu xiiseynayaa saamayn si ballaaran loo isticmaalo oo ay fududahay in lagu sameeyo natiijooyin aad u wanaagsan soo jiidasho leh heer muuqaal ah. Marar badan ayaan soo marnay naqshado halkaas oo loo adeegsado qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka leh sawirro gudaha ku jira, waa saameyn lagu gaaro kor u qaado qoraal oo ka dhig mid muuqaal leh oo soo jiidasho leh.
Isticmaal wanaagsan suugaanta qoraalka, oo lagu daro noocan ah farsamada waxay bixisaa natiijooyin xoogan oo ku filan si ay indhaha ugu soo jeediso tan qorista farshaxanka taas oo isku dareysa sii deynta farriinta iyadoo loo marayo isticmaalka qoraalka iyo ku darida isticmaalka sawirada. Had iyo jeer waxaa la yiri sawirku wuxuu ka qiimo badan yahay kun eray, laakiin saameyntan fudud waxaan awoodi doonnaa inaan labadaba isku darno: ereyo iyo sawiro.
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah qor xoogaa qoraal ah en Photoshop, Waxaan aadeynaa aaladda qoraalka, xulo font oo aan wax qorno. Waxaa lagugula talinayaa a qorista jirka oo weyn (aad qaro weyn) si saamaynta loo muujiyo. Waan awoodnaa soo degso farriimaha websaydhka Dafont.
Talaabada labaad ayaa ah lakulmo lakabka qoraalka (ama lakabyo) oo u rogo lakab caadi ah. Guji badhanka midig ee midig ee lakabka qoraalka kadibna dooro ikhtiyaarka ah qoraalka ku xooji.
Haddii aan isticmaalnay wax ka badan hal qoraal, waa lagama maarmaan kufarax lakabyada oo dhan iyo milmaan lakabyada qoraalka hal lakab. Si tan loo sameeyo waxaan doorannaa dhammaan lakabyada (xakamaynta cadaadiska + guji lakab kasta) waxaan ku riixnaa badhanka midig ee saxda ah oo xulo tabta isku dar lakabyo.
Waxaan u baahanahay fur sawirada qaar gudaha Psawir waayo, ku dabbaqo gudaha qaabka qoraalka. Waxaan fureynaa sawiradeena waxaanna ku hagaajineynaa qoraalka qaab loo dhigo meesha aan dooneyno in lagu arko qaab qoraalka. Waxaa lagugula talinayaa inaad dhigatid lakabka qaab-qoraalka kore lakabka muuqaalka, qaabkan waxaan sifiican ugu arki karnaa kan halabuurka.
Tallaabada xigta ayaa ah tan ugu muhiimsan maxaa yeelay waxay mas'uul ka tahay gaaritaanka saameynta aan raadineyno, waa inaan raacnaa qodobbadan:
Guji lakabka qoraalkaama ilaa aad ka aragto dulucda qoraalka (xakamaynta + dhagsii lakabka)
Xullo (adigoon gujin) lakabka sawirka.
Tag xulashada lakabka cusub adoo adeegsanaya nuqul.
Waxa aan ku gaarnay tallaabooyinkan ayaa ah inaan sheegno Photoshop waxaan rabnaa inaan abuurno a lakabka leh xulasho qorista qoraalka laakiin koobiyeynta lakabka aan soo xulnay, waxaan ula jeedaa inaan nuqul ka sameeyo sawirka oo keliya. Markaad xulaneyso font, Photoshop xulasho ayuu noo abuuray iyada oo ah foomka waraaqaha.
Tan ka dib waa inaan haysanaa kuweenna saameyn layaableh dhammeeyay.
Waxaan tirtirnaa lakabka qoraalka oo dhan ama si fudud (sida kiiskeyga) waxaan tirtirnaa qoraaladaas aanan rabin. Waxaan isticmaali karnaa cinjirka Photoshop ama ka saar lakabka gebi ahaanba.
ka fursadaha saamaynta noocan ahi waa aan xad lahayn waxayna ku tiirsan yihiin uun hal-abuurnimadeena markaan shaqeyno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Isku dar sawir qorista sawirada ku jira Photoshop